ओली झापा, प्रचण्ड सुकुटे ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, कार्तिक १४, २०७८ मा प्रकाशित
हौ विध्वंसे काका ! प्रधानन्यायाधीशलाई ‘काम लाग्यो भाँडो, आफल तेरो ठाँडो’ बनाउँछन् कि क्या हो ? तर, प्रधान पनि दह्रै रान ! ‘मलाई छोयौ भने पोल खोल्दिन्छु’ भनेर हाम्रो देउवा दाइ, प्रचण्ड, माधव र बाबुरामको सात्तो लिएछन् । हाम्रा बुद्धिजीवी भनाउँदा र पत्रकार पनि जब्बर छन् । अहिले पनि ओलीको सेटिङ भन्न छाडेका छैनन् । सेटिङ चै हाम्राहर्को रछ ।
भिरघरे भतिज ! तँ पनि छन्द न बन्दको कुरो गर्छस्! ‘बिगारेको जति ओलीले’ भन्नु पर्छ भनेर गठबन्धनका नेताहर्को बैठकले निर्णय गरेपछि नभनी हुन्छ त ! कि कसो सण्डे ?
वाइयात कुरो नगर काका ! अब तिमार्ले धरहरा अलि बाँङ्गो थियो ओलीले सोझो बनाउन लगाएर खत्तम पा¥यो, रेल पनि लिकमा मात्र कुध्ने ल्याएछ । हाम्रो प्रचण्डले हो भने जतासुकै कुध्ने ल्याउने थिए भन्न मात्र बाँकी छ । चोलेन्द्रले जब मुख खोल्छन् तब तिमार्का पत्रकार र बुद्धिजीवीको पसिना छुट्छ ।
के धम्की दिन्छस् सण्डे ! हाम्रा पत्रकार र बुद्धि नभाका परजीवीहरु हाम्रो पक्ष छाडेर सत्यको पक्षमा लाग्न सक्ने अवस्थै छैन । तिनार्का लागि कम खर्च भाको छ र । ओली बाँचुन्जेल ओलीको विरोधमा हाम्रा पत्रकार कन्दनी कसेर लेख्न तयार छन् । कोही कसैले गलाउन, पकाउन, बकाउन सक्ने छैन ।
अनि काका ! तिम्रा नेता प्रचण्ड चैं चितवनतिर गएर के–के बरबराउँदैछन् । पहिला आफैंले बम पड्काएर ४२ जना ठहरै पारेको ठाउँतिर अहिले बलिन्द्र धारा आँशु झार्दै नागरिकता बाँड्दै छन् अरे।
चुनावी राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भिरघरे ! हाम्रो महान काम्रेड, नेपालका एक मात्र राष्ट्रनायक प्रचण्डले एकातिर तीर हानेर अर्कातिर मान्छे ठहरै बनाउन जानेको छ । चितवनमा प्रचार गर्ने, रोल्पाबाट चुनाप लड्ने नीति हाम्रो प्रचण्डको रहन्छ । जनार्दनको क्षेत्र र रोल्पामा हामीलाई कसैले हराउन सक्तैन ।
के गर्छौ त काका ! अब २०६४ सालमा जस्तो उभिण्डे खोलमा विषेडी पल्टा खाँदैन । त्यसबेला त बाकस साटेर, मान्छे काटेर, बुथ कब्जा गरेर सप्पै गरेको कुरा प्रचण्ड आफैंले भनी सके । बिचरा प्रचण्डलाई कति पोल्दो हो । त्यसै पोल्टिकल डिप्रेशन भाको हो र ! फतक्क नौनारी गलेको होला । अहिले चितवन पुगेर ओलीले गर्दा आफू बदनाम हुँदै गएको महसुस गरेछन् । आफू दुई पटक प्रम हुँदा के हेरेर बसे कुन्नि । अहिले ओलीले केही गर्न दिएनन्, राम–सीताको मूर्ति राखिदिएर आफूलाई तल पारे, नेपालको एक मात्र नेता मलाई खत्तम पार्न ओली लागेका छन्, भनेर भाषण गर्दै छन् ।
सण्डे ! तँ पनि बढी नै बोल्छस् । हाम्रो प्रचण्ड उठ्ने जिल्लामा एमालेको महाधिवेशन किन गर्नु प¥यो ? हाम्रो काम्रेडलाई समाप्त पार्ने योजना अन्तर्गत चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय हाम्रो दुश्मनी एमालेले गरेको प्रष्टै छ । तर, हामीले पनि जानेको छ । जुनसुकै हालतमा, जेसुकै गरेर एमालेलाई हराएरै छाड्छौ ।
तिमारु यो गठबन्धन चुनापसम्म रहन्छ भनेर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख्न खोज्दै छौ । अर्को कुरा माओवादी, नेकपा एस र जनमोर्चाको मोर्चा बन्छ अरुको बन्दैन काका ! हाम्रो काँग्रेसले तिमारु जस्तो लुते, खिनौटे, जनताले नपत्याउने, तिरस्कृत पार्टीहरुलाई चुनावी मोर्चा मार्फत् वैतर्णी तार्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । सप्पै ठाममा हामीले जित्ने सम्भावना बढेका बेला हाम्रो भाग तिमार्लाई किन दिने ?
निहुँ खोज्ने कुरो नगर भिरघरे ! अहिले तिमार्को देउवालाई कल्ले प्रधानमन्त्री बनाको ? चोलेन्द्रलाई ‘ठोकेर परमादेश गर्न’ कस्ले लगाएको ? यसको गुन तिर्नु पर्दैन ? परमादेश गराउन हाम्रा प्रचण्डले सानो पापड बेल्नु परेको थिएन । अहिले चटक्कै विर्सन मिल्छ ?
मज्जाले मिल्छ काका ? कहिले काँग्रेससंग, कहिले एमालेसंग, कहिले ३६ दलसंग, कहिले झिल्केसंग, कहिले लाटासंग मिलेर चुनाप लड्ने तिमारुसंग एमाले र काँग्रेस मिल्न सक्तैन । तिमारुले आफ्नो धरातल विर्सी सकेका छौ । अबको चुनापमा धरातल कहाँ हो थाहा पाउँछौ । स्थानीय चुनापमा काँग्रेससंग मिलेर चितवन लगायत केही ठाउँमा जित्न सफल भयौ । प्रतिनिधिसभा चुनापमा एमालेलाई भुलभुलैयामा पारेर राम्रै नतिजा ल्यायौ । अब फेरि नेपाली काँग्रेसलाई बर्गल्याउन खोजेको होला नाप्पियो ! एक्ला–एक्लै भिड्ने हिम्मत नहुनेहरु गए गोलखाडी !
मेरो कन्सरी तात्ने कुरो नगर भिरघरे ! एमाले र काँग्रेससंग एक्ला एक्लै लड्न हामी पनि सक्छौ । तर, मिलेर जाँदा एमालेको एक दुई सिट भा पनि घटाउन सकिन्छ कि भन्ने आश गरेको मात्र हो । एक्लै चुनापमा जाने हो भने काँग्रेस पनि सकिन्छ । एमालेलाई छाडी दिए हुन्छ ?
हेर काका ! अबको चुनापमा भिडन्त भनेको एमाले र काँग्रेसकै हो । खाओवादी, लुटोबादी, चन्दाबादी, ठेक्काबादी, समाजवादी पर उभिएर रमिता हेर्ने मात्र हो । अनि चुनाप पछि ‘एमाले र जनताले छानिछानी हामीलाई हराए’ भन्ने रक्सी धोक्ने बस्ने !
ठिक भन्यो सण्डे भाइले । एमाले वडा अधिवेशन र नगर अधिवेशनबाटै आक्रामक भएर टोलदेखि जिल्ला ब्यापी फैली सक्यो । उसलाई त स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभाको चुनाप लागे जत्तिकै भाको छ । ओलीको दौडधुप उत्तिकै छ ।
यो भिरघरे पनि ओली प्रशंसा गर्न थाल्यो । हाम्रो प्रचण्ड पनि दौडेका छन् ।
तिम्रा प्रचण्ड सुकुटेतिर दौडिएका छन् । पीडा तड्पन, रनाहा पोल्टिकल डिप्रेशन बोकेर हिडेका छन् । काका पछि कुरो गरौला । अहिले भने हामी लाग्छौ ।